Mba hahatonga ny tongotra ho tsara tarehy sy mahafinaritra, mila manao fanatanjahan-tena ianao, izany dia hanaisotra ny tavy mavesatra sy ny tsiranoka. Tsy vitan'ny hoe manao fanatanjahan-tena fotsiny ianao fa ao an-trano. Misy fampiharana tsotra ho an'ny tongotra matevina izay manan-danja hanatanteraka araka ny fitsipika efa misy. Ny tsara indrindra dia ny mampifandray ny fiaramanidina aerobika sy ny hery, izay hanome vokatra tsara. Ao anatina toeram-pitsaboana iray dia ampy ny fampidirana 5-7 fampiharana izay tokony atao amin'ny fomba 3-4, manao ho an'ny 17-20 fiverimberenana.
Raskachka . Ity fampisehoana ity dia ahafahanao mampitony ny hozanao ary ento ao anaty tono izy ireo. Ataovy araka izay azo atao ny tongotrao, ary tandremo ny tananao eo anoloanao, mampifandray azy ireo amin'ny sakana. Mianjera amin'ny làlana iray, mandohalika ny lohalika mandra-pambolena azy, ary ny tongotra hafa dia tokony hijanona mahitsy. Rehefa manao izany ianao dia tokony hanandrana hanaisotra ny valin-kasasarana, toy izay azonao atao. Sasao ny toerana mandritra ny segondra vitsivitsy, ary avereno aty amin'ny PI ary avereno averina any amin'ny faritra hafa ny fampiharana.
Tsimoka manohitra ny rindrina . Ny fanaovana fantsom-pomba isometrika, izay miasa koa amin'ny hozatra glute. Mijanòna eo akaikin'ny rindrina iray ary mitsangàna eo anoloany miaraka amin'ny lamosinao, ary asehoy tsara ny hazondamosinao. Mianjera mandra-pahatongan'ny fotoana ahafahana mamelatra ankavanana eo amin'ny lohalika, ary tsy mahatratra ny fihodinana amin'ny rihana. Mijanòna eto amin'ity toerana ity mandritra ny fotoana maharitra.
Mandeha mitsambikina . Azonao atao, mazava ho azy, ny fanatanterahana ny dikan-tsoratra nentim-paharazana, fa mba hanatsarana ny vokatra, dia tsara kokoa ny mameno ny fanafihana amin'ny tsindry. Izany dia fanatontosana lehibe ho an'ireo te hanala lanja . Raha azo, dia azo atao amin'ny lanja fanampiny izy, ary manangona horonantsary. Miezaha lalandava lalina ary mipetraha, fa ataovy antoka fa tsy mandeha ny kiraro ny lohalika. Zava-dehibe ny manintona ao amin'ny kibo ary mitazona ny lamosinao, miondrika kely. Avy amin'ny toerana voalohany raisina amin'ny fakana aina, mitsahara, miorina eo amin'ny tongony aloha ary manamboatra tampoka avy hatrany. Nandritra izany, nentina ny lohalin'ny tongony ary nitraka ny tandrony teo an-tampony. Aorian'ny fitsangantsanganana dia mihodina avy hatrany.
Atsipazo ny tongotrao . Izany fampiharana izany amin'ny fanamafisana ny hozatry ny tongotra dia matetika atao amin'ny zoro rehetra. Apetraho ny tananao mba hahatonga azy ireo ho kely kokoa noho ny soroka. Atsangano eo amin'ny lafiny iray ny tongotra iray mandra-panazava amin'ny rihana, raha mitazona ny lanjany ankavanana amin'ny lohalika. Ajanony ny toerana, alao ny tongotra, fa aza kasihina amin'ny tany.
"Scissors" . Izany fampiharana izany, ny fihenan'ny tongotra be loatra, dia fantatra amin'ny maro hatramin'ny fotoam-pianarana ary raha toa ka azo tanterahana tsara, dia azo atao ny mameno tsara ny hozatry ny tongotra . Mipetraha eo an-damosinao ary atsangano ny tongotrao, ary tazano eo akaikin'ny vatanao ny tananao. Manaova "sira", manaparitaka ny tongotrao eo amin'ny andaniny ary ento miaraka aminy. Ity fampiasana ity dia manome lanja tsara amin'ny gazety.
Makhi . Ny fampiasana tsara indrindra ho an'ny tongotra dia ny fiaramanidina izay tsara indrindra atao amin'ny enta-mavesatra, ohatra, afaka mampiasa pads manokana na kiraro fanatanjahan-tena ianao. Mahi ahafahanao miasa tsara ny andilanao. Mitsangàna eo amin'ny seza ary takaho ny lamosina. Asandrato ny tongotrao eo amin'ny andaniny, ary avereno miverina. Aza asiana ny tongotrao eo amin'ny gorodona, izay ahafahanao mitazona ny fihenjanana foana. Zava-dehibe ny manao ny zava-drehetra amim-pilaminana, tsy misy mitsikitsiky.
Sumo nivadika . Mitsangàna mahitsy, mametraha ny tongotrao betsaka noho ny sorokao ary esory ny tongotrao. Amin'ny tanana dia azonao atao ny maka horonam-peo ary itazozao izany eo anoloanao izany ka handalo eo anelanelan'ny tongotra mandritra ny fihodinana. Mialatsiny, mitsambikina mialohan'ny hidiran'ny rivotra. Tazony lavitr'ezaka araka izay tratra ilay valin-kasasarana. Aza avela hiaraka aminao ny lohalinao ary avelao izy ireo amin'ny fiaramanidina iray amin'ny tongotrao. Ny fitsanganana dia mitsangana amin'ny fofona.
Karakarao ny puppy alemana mpiandry ondry
Inona no jiro mampidi-doza avy amin'ny ashberry chokeberry?
Fanampiana voalohany ho an'ny ratra elektrika
Dresses avy amin'ny silk
Nahoana ny zaza no mandrora ora iray aorian'ny sakafo?
Volana fanangonam-bolongana nataon'ny Guerlain 2014
Ny fomba fitondran'i Mosko amin'ny fitomboan'ny zana-ketsa